Sony Vegas u Mac: Edit Videos on Mac OS
> Resource > Video > Sony Vegas u Mac: Edit Videos ee Mac OS
The taxane Sony Vegas ka mid ah barnaamijyada video tafatirka ugu caansan tahay, iyo Sony Vegas Pro waa laga reebo lahayn. Waxaa la iman interface iyo awood video tafatirka muuqaalada user-friendly ay fududdahay in la ogaado. Waxaa ka mid ah tiro balaadhan oo ah la dhisay-in qalab loogu talagalay tafatirka audio, video tafatirka, guurka, iyo koobab, iyo in ka badan. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Mac hore oo kale.
Maalin maalmaha ka mid ah marka aad iska badasho ka Windows si Mac, oo aad naftaada ka codsan kartaa " ma shaqo Sony Vegas ee Mac? " iyo raadin eb ee jawaabta. Nasiib darro, Sony Vegas waa Windows oo keliya. Waxaad aan kala soo bixi kartaa oo rakibi Sony Vegas ee Mac. Sidaas darteed ma jiraa kale ah Sony Vegas u Mac in aad bixisaa leh la mid ah. Haa, waxaa jira dad badan. Dabcan, waxaan ugu Wondershare talinaynaa Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) sida wanaagsan Sony Vegas for kale Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ah) si aad xaalkaa video si fudud kula soo diyaariyeen ah ee wax soo saarka saamaynta, guurka, horyaal, video iyo DVD muuqaal ah, iyo Dabcan dhammaan qalab caadi video tafatirka.
Halkan waxaan ku tusi doonaa sababta Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa Sony Vegas u Mac kale ugu fiican waa in aad leedahay.
Fududahay in la isticmaalo weliba awood leh
Idinkuna ma waxaad u baahan tahay waqti dheeraad ah si ay ula qabsan karaan interface user. Waxaa kor u qaad hadda oo markiiba bilaabi video tafatirka. Waxba ma ahan wixii aad rabto in aad, waxaad ka heli doontaa aalad saxda ah ee faraha aad iyo aad u hesho wax fudud oo dhaqso u sameeyey, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn falinjeeerka, lana siii, qoqobada, tafatir audio (voiceover iyo music soo jeeda), saamaynta muuqaal ah, kala guurka, koob , iwm
Taageerada All Popular Video / Audio / Graphic qaabab
Si toos ah dajiyaan wax kasta aad rabto in aad wax ka bedel si Video Editor - ugu wanaagsan ee Sony Vegas u Mac (Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 taageeray). Diinta No ayaa loo baahan yahay. Taageero qaab Broad idinka Koriya waqti badan oo ka dhigeysa meel dheeraad ah oo hal-abuurka. Qaababkan soo socda waxaa taageera:
Video qaabab : MP4, MOV, FLV, AVI, TS, TRP, M2TS, MTS, TP, DAT, wmv, MKV, DV, mod, TOD, VOB, 3GP, ASF, F4V, M4V, Mpg, EVO
Qaabab Audio : AAC, AC3, AIF, AIFF, daanyeer, AU, FLAC, M4A, MKA, MP2, MP3, OGG, regelingen, WMA
Handy Audio Faalladaada
Sony Vegas asal ahaan waa software tafatirka audio qalabka audio kama dambaysta ah. Sida Sony Vegas u Mac kale oo weyn, Video Editor sidoo kale ku siiyaan qalab tafatirka audio anfacaya. Wax kasta waa track audio ee video, voiceover ama music soo jeeda, si fudud ayaad edit karaa si loo waafajiyo baahidaada, sida falinjeeerka, la isku qasin, saamaynta audio, iwm
Share Video Bulshada meel
Video wadaagga ka dhigtay fudud la Video Editor. Waxad abuuri kartaa videos for computer ama qalab mobile, si toos ah u geliyaan in YouTube, ama u gubato si DVD loogu daawashada TV-ga la DVD guriga ciyaaryahanka. Waxaad xitaa fariin u Facebook iyo Twitter soo markii uploading video in YouTube. All oo dhan, fursadaha la wadaago waa dhammaadka lahayn, iyo farahaaga. Video waxaa loo sameeyey si ay u wadaagaan qoyska iyo saaxiibada.
Wondershare Doonaa Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac ahaan aad ugu jeceshahay Sony Vegas for kale Mac ? Sii isku day ah oo u go'aan gaaraa. Ha seegin. Haddii aad og tahay barnaamij kasta oo la mid ah sida Sony Vegas u Mac, aynu og in comment ah.